FALANQEYN: Maxaa ka dhalanaya go’aanka Baarlamaanka Puntland ay qaateen ee ku wajahan DF Soomaaliya?
June 29, 2020 NEWS 16
GAROOWE(P-TIMES) – Go’aanka cusub ee ay qaateen mudanayaasha Baarlamaanka Puntland ee ku wajahan howlaha dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu noqon doonaa mid ay ku qasbanaanayso in ay fuliso xukuumadda uu hogaamiyo Siciid Cabdullaahi Denni, laakiin caqabado cusub ayaa gudaha uga imaan doona.
Safarkii madaxweyne Denni ku tagi lahaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka oo uga qayb gali lahaa shirka looga hadlayo arrimaha siyaasadda, doorashooyinka, amniga qaranka iyo mashaariicda ayuu ka baaqan doonaa.
Sida la ogaadayna ka hor isaga ayaaba baajiyey safarkan, wuxuuna door weyn ku lahaa in Baarlamaanku qaraarkan gaaraan ugu yaraan.
Sidaas oo kale mashaariicda xagga horumarka ee ay xukuumadda federaalku saamaynta ku leedahay kana socda gudaha Puntland ayey ku noqon doontaa mushkilad cusub oo culays ku abuurta.
Iskaashiga la hakiyey ee ku saleysan xagga doorashada marka laga yimaado in lala macaamilo hay’addaha dowladda federaalka ayaa ka dhignaan doonta mid saameyn balaaran isku yeelata, waxaana suuragal ah in laysku adeegsado waxyaabo kala duwan.
Xukuumadda Puntland uma sahlana in ay si fudud iskaga talaabsato arrimaha ay doonto marka la eego xaaladda magaalada Muqdisho iyo qaraarka ay gaysay Baarlamaanka ee ku wajahan in la hakiyo la shaqeynta xukuumadda federaalka.
Beelaha Puntland ma aqoonsan doonaan go’aanka Baarlamaanka Puntland, waxaana ay dirsan doonaan wakiilada labada golle ee federaalka, taasna waxay wiiqi doontaa go’aankan in uu noqdo mid hirgala oo dhinacyada oo dhan ay isku raacan.
In gudaha Puntland siyaasad kale laga dhex-bilaabo inkasta oo aysan si sahlan ku imaan karin,haddana waxay kamid noqon kartaa caqabadaha cusub ee soo kordha, iyadoo hore Puntland ugu eedeysay xukuumadda federaalka in ay faragalin ku hayso arrimaha gudaheeda haddana qorshaha cusub ayaa dhabaha u xaari kara.
Puntland waxay door weyn ku leedahay dawladnimada Soomaaliya, waxayna kamid ahayd dhinacyada sida adag ugu dagaalamay in la hirgaliyo nidaamka federaalka, laakiin miraha hadda socda ayaa noqonaya dharbaaxooyin siyaasadeed.
Tan kale ee dhici karta ayaa ah in Puntland ay iskeed kaligeed isku maamusho sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame.
Gudoomiye Warsame ayaa sheegay in madaxda dowladda ay ka baxeen balamo badan isla markaasna aysan waxba qaban sidoo kalena uusan jirin qorshe uga diyaarsan doorashada soo socota oo muddo kororsi ay ka dhigteen,
Matalaada aqalka sare ee gobolka Banaadir ayuu ka hadlay, waxaana uu sheegay in deegaanada Puntland ay ka maqan yihiin kuraas badan isla markaasna Puntland aysan aqbalayn taas sidoo kalena Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayuu sheegay in kuraas kale ay iyaguna ka maqan yihiin.
Shirka Muqdisho ayuu sheegay in aan loo diyaarin hanaankii loogu tala galay ayna ka qayb galayn Puntland, isagoona hoosta ka xariiqay in dalka aan loo diyaarin marxalad wacan.
Xiisadaha ka dhex aloosan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland ayaa sii xumaan kara, waxaana madaxtooyada Puntland lagu cadaadinayaa in mowqif adag ay ka qaadato arimaha haatan taagan walowse madaxweynuhu uu qayb ka yahay arimahani.
Horta intii ka dabaysay,markii Deni uu la wareegay,Baarlamaanka,la soo magacaabo,ee Puntland,oo uu keensaday,nin la yiraahdo Abwaan,wax Baarlamaan ah,oo shaqeeya ka ma jiro Puntland,ee waa shaabad uu Deni isticmaalo.
Arimihii Puntland ayey,xildhibaanada la soo magacaabo ee Puntland ku guuldaraysteen,ma xaa ay u tari karaan,Soomaali inteeda kale.
maamulka Deni iyo ayey,si cad u yiraahdeen, wax isla xisaabtan ah,lala ma yeelan karo.Marka soo u ma eka in ay indhaha dadka Puntland ka jeediyaan,arimaha u danta shacabka reer Puntland ,la daalaa dhacaya,dhibaatooyin,badan,sida,musumaasuqa,boobka hantida dadwaynaha Puntland,bur burka haykalkii dowladnimo,oo awalba aadka u liitay.
war Puntland shacabka degan,ma aha kuwo.lago dagi karo,in la yiraahdo,gobolka Banaadir baa matilaad la siiyey.waxay ilatahay,in Puntland u baahantahay,baarlamaan,dhab ah iyo madax maamul oo daacad ah oo ka duwan kuwa hadda maamulka haya ee fashilmay.
Marka ay shaxda siyaasadeed noqoto adkeysin dambe ma jiri karo, afeef hore ayaa laga ma maarmaan ah. Sababtu waxaa weeye shaxdani la mid ahaa ciyaaraha aan bogag hore ku soo arkay in lagu mataalay sida kubbadda cagta, waa shax halis ah ee u baahan xirfad iyo xariifnimo ku salaysan fiiradheeri iyo indheergaradnimo qoto dheer. Inta aan miiska la soo xaadirin ayay laga ma maarmaan tahay in laga sii baaraandego oo dhigaaaga la sii darso. Dhiggaaga oo aad maankiisa iyo mabda’iisa sii darasto wax weyn ayay kaa tartaa marka aydun isa soo hor fadhiisataan.
Runta dhabta ahi waxaa weeye in caadifadaha ka dhasha nabar waaxda siyaasadeed cid loogu geystay aanay wax wanaag ah ugu soo kordhinin sumcadda iyo cawaaqiibta dambe. Marka shaxda siyaasadeed lagaaga raayo boodbood iyo booteyn wax wanaag ah kuu ma soo kordhiyaan in aad isa sii ceebeyso mooyaanee. Waxaan hadalkaygan uga gol leeyahay in ay madaxda Puntland maanta dhex barriiqan yihiin cawaaqibtii ay hore uga feejignaan waayeen ee ka dhashay qaladaad hoggaamineed ee ay si ka fiirsasho la’aan ah ugu dhaceen teer iyo billawgii ajeendihii geeddisocodka siyaasadeed ee Soomaaliya. Qaladaadkaas kuwooda aasaasiga ah bog cusub ayaan akhyaarta si faahfaahsan ku la wadaagi doonaa haddii uu Rabbi idmo. Waa in se la fahmo in aanay caadifaduhu naga saari karin cakirnaanta qaladaadkaas ka unkamay.
Hadii Hogaanka Puntland leeyahay Ku dhac,kalsoonida shacabkana haysto isaga ayay Ku xiran tahay inuu Puntland ka saaro go’doonka siyaasiga ah ee federaalku u sababta yahay,go’aamada uu gaaro wakhtigan xasaasiga ah ayaana ama guul gaarsiin karta Puntland ama guul darro.
Tusaale shirkii Garowe hadii go’aamo adag ay kasoo bixi lahaayen laguma dhiiradeen in LA waayo markii ugu horaysay doorkii Puntland Ku lahayd siyaasada Somaliya muuqan waayo meeshana ka baxo,horena go’aan aanay ogolayn aanu soconeyn.
Dib u habeyn degdeg ah ayaa la rabaa wakhtigan kala guurka ah,xasaasigana ah ee cid kastaa daneheeda meel marsanayso.
Siyaasiyiinta,hogaankii hore,ururada bulshada,isimada dalka waxa laga rabaa inaan masiirka mandiqada lagu fiirsan keliya hogaanka ee la siiyo talo loo dhan yahay.
Iyadoo laga faaiidaysanaayo go’aanka mar dhow kasoo baxay beesha caalamka ee lagu diiday qaraarada sida boobsiiska ah loo marsiinayo baarlamaanka,looguna baaqay in wax la wada ogolyahay laysaga yimaado,halla qaato go’aamo laga fekeray.
Adeer cawaan caqliga futada uga jiro ayaa tahaye Puntland Farmaajo iyo villa wardhiigley oo aan jirin ayag jidhay ayadaana dhistay waxa aad hada u taqaan dowlada Farmaajo. Puntland wax aan khasaaro iyo luguuyo ahayn kuma qabto dowlad ku sheega villa wardhiigley Ugandise ku ku horjoogo waxna ugama baahna laba state oo aan is aqonn weye. Puntland 3000 km oo amni iyo barwaaqo ah ayay ka talisaa oo xor ah markaa maxay uga baahanyahay nin 4 sano qol ku xiran oo Ugandise gaar ka hayo oo xitaa afgooye aan gaari karin. Puntland uma baahan villa wardhiigley waxna kagama xirna laskiin bil xaqiiqa waxa hoogaaya waa kuwa xamar jooga ee caqliga garashada midma lahayn.. taariikhdau waa mid qoran isna soo celisa burburkii somaliya cidii ku faa iiday iyo cidii ku hoogtay. Adeer somali waa burburtay waana is dishay waana kala tagtay wixii yaraa ee hedhiiska lagu ahaana maantay ayaa Farmaajo kooxdiisu god dheer ku rideen sidaas ayaana lagu kala tegay dibna isugusoo noqnmayso abid ee nin walbaa meeshiisa haku nabad galo. Puntland waa xor dhulkeedu Ugandise iyo amison ma joogaan aduunka ayay wax la qaybsanaysa.
Faalada ninka qoray fuleysanaa, farmaajo iyo waxa uu walaaqayo meel xun ayay Ku damaynayaan, reer puntland calaacal Laguna yaqaan horay u tashatay horayna way uga soconaysaa
War horta Puntland waa maamul goboleed la mid ah,maamul goboleedyada kale caay waxba ka na tarayso dooda dhabta ee jirta.
Maamulka Deni waa kii ugo liitay ee soo mara Puntland,waxa nasiib dara ah in howlihii shacabka Puntland in loo qabto at ahayd uu maamulka hada jiraa ku guuldaraystay,ka dibna uu xoofa saaray in uu indhaha Puntland ku ka jeeday xaqaaiqa dhabta ah ee ka jira Puntland.
War Dakadii Bossaso haljee ku danbaysay.
Baarlamaanka Puntland waa mid Deni shaabad u ah.
Musumaasuqa waa howl maalmeedka shaqo ee maamulka Deni.
Reer Puntland waa dad wadaniyiin ah oo daacad ah. Tusaale, Korontada maanta laga shito, Boosaaso iyo Qardho waxaa dhisay dowladii Kacaanka, in aay wax ku siyaadiyaan mooyaane, wax kamaaysan dhimin.
Halka kuwa Xamar ka buuqaya aay Boobeen, 100% wixii uu Qaran lahaa ee deegaankoodu laga dhisay oo Hantida Qaranka ka ahaa, 80%!!!
Waxaan qabaa dadkaa had iyo goor waxaay ku badbaadaan daacad nimadooda, oo dhagar kasta oo loo maleego, kuwii u maleegay ayaay ku noqotaa!
Sida Culusoowgii inta Mooryaanta Hawiye 50 Tigniko ah iyo dhaqaalihii Qaranka farta ka saaray yiri, Qabsada illaa iyo Burtinle ee Gablan iyo guuldarro kala noqday!
Reer Puntland waa nimankaa qaran jabkii kadib Soomaaliya ku soo kordhiyey, Airporo iyo Dekego aay Ummadda Soomaaliyeed u baxsan doonto sanooyin badan oo imaan doono!
Daacadi ma hungoowdo, weligeedba Gun farqaha ha ku dhegganaato!
Farsama Farmaajo waxay mareysaa in uu sumeeyey raiisal wasarihiisa Kheyre oo hadda la rabo in la isku sii raaciyo Qatar oo meedkiisa dhowaan la keeno Xamar… Salaamaad..
Xaaladda Soomaaliya Farmaajo meel xun oo khatar ah buu ku geeyey….waxayna u badan tahay in Soomaaliya ay gelidoonto xaalad adag oo dagaal sokeeye….
Beesha caalamka waxaa ka soo haray argagax iyo anfariir markey ogaadeyn in Farmaajo uu sumeeyey Kheyre oo uu arkey in uu yahay ninka keliyah ka hortaagan in Farmaajo mar labaad iyo mar saddexaad uu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya..
Hadda waxaa cabsi looga qabaa Farmaajo uu u sumeeyo Axmed Madoobe iyo Deni markey tagaan Xamar.
Shacabka Puntland hadaanu nahay Dhowr dad ah oo qaddar yar dabadeed tagaya somalia uga go’i mayno,wadani_nimadu way nagu jirin ilaa yowmul qiyaame,dalkii aanu naf iyo maalba uhurnay inaan usiyaadino mooyee KA dhimi mayno inshallah,
somali israaca INSHAlah
Maamulka Puntland ee Xaruntiisu tahay Garoowe, wax badan baa ka qaldan Sharci ahaan, Siyaasad ahaan waana muuqataa hadda.
Waxaay Dadka Phylosophers ah ” wixii la iska badiyo waa hallaabaan”
Damcan sidaas baa iiga muuqata Garoowe
Simply Tusaale Federalism baan jecel Nahay Heyad Ama Qof Dowladda dhexe ka socda ma imaan karo Degaanada uu ka taliyo maamulka Garoowe waa wax ka fog caqliga, iskabadaa Aqoon iyo Nadaam Dowladnimo.
Maalin dhaw Waxaan u jeednay DENI oo ku eedeynaya Dowladda dhexe asagoo leh waxaay faragelin ku haysaa Soomaaliland!!marka uu sidaas leeyahay Agab Caafimaad bay Dowladda dhexe gaarsiisey meelo ka mid ah Degaanada sida Buuhoodle, waa yaabi DENI maxaa ka qaldan?
2014 baa waxaa jirey in Horjoogihii Puntland Mr Gaas baa wuxuu iskudayey Dhismaha Maamulka Galmudug, Haddana Waxaan aragnaa labada Maamul Garoowe iyo Dhuusomareeb oo xabadka isku qaaday.
Hadda waxaa ii muuqata Jabkii Gaas mid la mid ah iney DENI ku socdo waddadaas, weliba arrinta Hadda DENI wado waa mid saameyn uusan mahadin
Iney kaga timaaddo degaanno badan oo ka mid ah Maamulka Garoowe.
War miyaadan ogeeyn in ay reer puntlaan u soo dulqaadanayeen 30 sano qaladaadka madaxda beelaha USC?War nimankaasu way diideen waxkasta oo soomaali isu kenaya.Way diideen in soomaaliweeyn loo wada xaq sooro.La soo marsiin waah in ay raacaan nidaamka wada u yaal ee ah federla system.Waxkasta oo uu adduun weynuhu ku bixiyo magaca soomaalweeyn xamar sooma dhaafaan.Reer puntlaana kuma qabsadaan oo waxay yiraahdaan war u daaya haddii ay ku qaboobayaan.Laakiin maanta xaalku waxuu marayaa dhiidii ugu dambeeysey
GO’AANKEE?! KEE DEERO DILA!
Waxa la yaab leh,Baarlamaanka Puntland oo iska aamusnaa,oo howlgab ahaa tan iyo markii Deni uu la wareegay ka danbow,markii uu keensaday nin la yiraahdo Abwaan baa wura la soo booday wax dadkii la yaabeen oo sysan wax shaqa ah ku lahayn.shaki kuma jiro in madax maamul goboleedka Puntland oo ka danbeeyo wax ay ku kaceen oo aan inaba wax wanaag ah u lahayn Puntland iyo Soomaaliya,
Waxaa nadiin daro ah in website yada aan ka kurin hab beeleedka ay niqdeen kuwo la jaan waada hadba wax maamulka Deni ee fashilmay oo soo jeediyo,gobolada kale ee Soomaaliya walow inta badan website ay iyan taageeraan heb beeleedka waxaase jira tiro aad u yar oo dhex dhxaad ah.
War waxgaradka Puntland waa in ay diidaan in kuwo danaystayaal ah in ay iska dhigaan dad iyaga oo qura ay u hadli karaan Puntland.
Cabdirisaaq juruule,Faroole,juxa iyo kuwa la mid ka ah xiligoodii waa uu dhamaaday.
Shacabka Puntland waa in uu helaa maamul u qalma dadka ree Puntland boo ka duwan mudkan iminka jira oo u yimi ka ganacsiga danta reer Puntland iyo boobka hantida dadwaynaha reer Puntland.
War halkee ku danbeeysaa Dakadii Bossaso oo ay si kala danbaysa u iibsadeen Gaas iyo Deni,war maxaa baaritaan madax banaan loogo samayn waayey musumaasuqii DP World iyo laluushkii laga qaatay.
Bookka khayraadkii kaluunka ,oo Deni iyo xulufadiisa ay shatiyo sharci dara ah siiyeen dhirkado kaliumaysi,taad ayaa u baahan in shacabka iyo wax garadka reer Puntland ay wax iska waydiiyaan,ilayn Baarlamaan wax la yiraahdo iyo haykal dowladeed waxa baabi’yey maamulka Deni madaxda ka yahay.
Puntland guul iyo Soomaaliya guud ahaan
Binti – girl way carootay, iyada oo raali ah ayaad arki beri.. dhibaato ma jidho… baayo waa siyaasad
Waxaan la yaabay dadka Somaliyeed ee Maamulka Farmaajo ee 2 km square ah, ku sheegaya Dawlad, Wallaahi adduunku wuxuu ogyahay inaanu dawlad ahayn, oo iska daa xuduudaha ay sheegtaane Afgooye iyo Balcad gaadhi karin, oo sharci , amni kala dambayn jirin, 10 dhakhar oo lagu dilay meel Wardhiiglay 10 km u jirta, cid maloo soo qabtay, arrinkaasi meel kale dalka kama dhaco sida Jubbaland iyo Puntland, Farmaajo waa artificial wixiisu waa cometic, waa loox qallalan oo ringi la info mariyey, haddiii soo noqdona waa fadhiid Vilada lagu waardiyeynayo, oo maxbuus ah, malinka uu waddan kale aado buu nafisaa oo jeelkaa ka baxaan, Hawiye wuu tashaday waa ogyahay inaanay isku-xukumi karin, ninkan fadhiidka ah bay meesha ku waardiyeystaan lacagta la keeno Somalia halkaa ma dhaafto 90%, ma ogtahay in Odoyaal Hawiye ah iyo siyaasiyiin sida Cali Mohamed Geeddi iyo Salaad Cali Jeelle iyo madax-dhaqameed ciida ka badan mid waliba bishii qaado lacag joogto ah, ma ogtahay in huteeladoodii wada buuxaan. Waxana la yaabsanahay kuwa sheegta Puntland oo garashoodu gaaban tahay oo inan gubeed ciil qaba oo Deni ku dheggan, wallee ama ” Gabooyaley noqdoo Geel nin kale Raacay, ama Guhaadow waxaan geysto waaba la ogaan” Kuwa Farmaajo u sacbinaya nin iska fadhiid ah oo sharoobo ku socoto, oo madaxweyne ugu yeedhaya waa yaab,